यसरी पत्ता लागेको थियो बुद्धको जन्मथलो
लुम्बिनीलाई गौतम बुद्धको जन्मथलोको रूपमा पुष्टि गर्ने एक मात्र प्रमाण हो, त्यहाँ ठडिइराखेको अशोकस्तम्भ। हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ, तेस्रो शताब्दीमा मौर्य सम्राट् अशोकले स्तम्भ ठड्याएदेखि लुम्बिनीको अस्तित्व कायम छ। तर, सत्य त्यस्तो छैन। सम्राट् अशोकले यात्रा गरेको केही शताब्दीपछि ...
आखिर मानिस न हो, समयका हरेक पलको हिसाब-किताब कहाँ राख्न सक्छ र? नदीझैँ। नदीलाई पनि कहाँ पत्तो हुँदो हो, समयको भेलमा आफैँसँग के–के बगे भन्ने। तर, कति किनारासँगै छुट्टिँदै जान्छन् त कति अविरल बहिरहन्छन्, त्यही नदीको भेलमा गाँठो परेर। हरेक मानिसले जीवनमा ह...
मजस्ता समाजवादीलाई ऐतिहासिक भौतिकवादसँग कुनै आपत्ति छैन। ऐतिहासिक भौतिकवादसँग मद्दतबिना समाज र इतिहासलाई बुझ्न सकिँदैन। इतिहास एकमात्र त्यस्तो प्रयोग शाला हो, जसको भौतिकवादी अध्ययनले समाजलाई बुझ्न सकिन्छ। द्वन्द्वात्मक भनेको केही पनि होइन भन्न चाहन्...
काठमाडौं : निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलन सहज थिएन। तत्कालीन नेपालको परिवेशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन आफैँमा जटिल थियो। २०६२/०६३ मा निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनको उभार उठ्यो। नागरिक आन्दोलनको जन्म...
‘माँ कसम अब् कभी नहीँ खेलेँगे’
अमेरिकासहित गठबन्धन मुलुकले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्दा ठुल्‍ठूला चोट बोक्ने लाखौं होलान्। तर, मनको कुनै कुनामा त्यो आक्रमणले चसक्क बिझाएकामध्ये म पनि एक हुँ। हुन त, कालान्तरमा त्यो काँडाको बिझाइ मात्र हुनपुग्यो। अचम्म कै हुने रहेछन्, आफूले सोचेको र कल्पना गरेभन्...
जमिन र मनमा कहिले भुइँचालो जान्छ, विज्ञानले समेत पत्तो पाउन सक्दैन। हामी साधारण मनुष्यको यसको गहिराइ बुझ्ने हिम्मत नै के? आजभन्दा ४ वर्ष अगाडि गोरखाको बारपाकमा विनाशकारी भूकम्प जानुभन्दा एक क्षणअघि पनि कसलाई थाहा थियो र, धेरैको सर्वश्वहरण हुँदै छ भनेर। भूकम्प गयो, हज...
| बैशाख ५, २०७६
समय र काल कहिल्यै हाम्रो बन्दी बन्न सक्दैन। तर, काल–परिस्थितिले कहिले अति मीठो अतीत सुम्पिएर जान्छ त कहिले दु:खका भवसागर तर्न बाध्य बनाउँछ। आफ्नै ताल र चालमा एकसुरले अघि बढिरहने यही समय कति बेला हाम्रो जीवनलाई अन्धकार गुफाझैँ कहालीलाग्दो बनाइदिन्छ, अनि कहिले आक...
समयको छालले मानिसलाई कहिले कहाँ र कता हुत्याउँछ भन्न सकिँदैन। कसको नजिक र टाढा पुर्‍याउँछ, त्यो पनि अलिखित नै छ। तर, यही समयले छाडेर गएका सम्झना कहिलेकाहीँ साह्रै मिठो याद बनेर रहन्छन्। तर, जिन्दगीमा त्यसको महत्त्व खासै हुँदैन। त्यस्ता सम्झनाले एकछिन मस्तिष्क भने झ...
मानिसको जिन्दगी गोलाकार रेखामा चल्दैन, जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँ अन्त्य हुने। चक्रपथ झैँ। मानिसको जीवन त बक्ररेखामा दौडिन्छ। उतार चढावपूर्ण, कहाँ गएर टुंगिन्छ पत्तै नहुने। त्यसैले जीवनमा जे पाइएको छ, त्यसलाई हाँसेर स्वीकार गर्नुपर्छ, रमाउनु पर्छ। नपाएका कुरा मेरो होइन रह...
विचौलियाका कारण अनियमितता बढ्दै : प्रमुख आयुक्त